गोपनीयता नीति - उद्धरण प्याडिया
प्रभावकारी मिति: जून २,, २०१ 29
हाम्रो वेबसाइटको ठेगाना https://www.quotespedia.org हो।
कोटस्पीडिया ("हामीलाई", "हामी", वा "हाम्रो") ले https://www.quotespedia.org वेबसाइट ("सेवा") संचालन गर्दछ।
यस पृष्ठले डेटाको स collection्कलन, प्रयोग र खुलासा सम्बन्धमा हाम्रा नीतिहरूको जानकारी दिन्छ जब तपाईं भ्रमण गर्नुहुन्छ र / वा हाम्रो वेबसाइट र / वा सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ र छनौट तपाईं त्यो डाटासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ।
हामी यो डाटा सेवा प्रदान गर्न र सुधार गर्न प्रयोग गर्दछौं। वेबसाइट प्रयोग गरेर, तपाईं संग्रह र यो नीति अनुसार जानकारी को उपयोग को लागी सहमत हुनुहुन्छ। यस गोपनीयता नीतिमा अन्यथा परिभाषित नगरेसम्म, यस गोपनीयता नीतिमा प्रयोग गरिएका सर्तहरूको समान अर्थहरू हाम्रा सर्त र नियमहरूमा छन्, https://www.quotespedia.org बाट पहुँचयोग्य
हामी तपाइँको सेवा प्रदान गर्न र सुधारको लागि विभिन्न उद्देश्यहरूको लागि विभिन्न प्रकारका जानकारी स collect्कलन गर्दछौं।
हामी कसरी वेबसाइट पहुँच र प्रयोग ("प्रयोग डेटा") को बारे मा सामान्य जानकारी स collect्कलन गर्न सक्छौं। यस उपयोग डेटाले तपाईंको कम्प्युटरको इन्टरनेट प्रोटोकल ठेगाना (उदाहरण आईपी ठेगाना), ब्राउजर प्रकार, ब्राउजर संस्करण, हाम्रो वेबसाइटको पृष्ठहरू जुन तपाईंले भ्रमण गर्नुभयो, तपाईंको भ्रमण गर्ने समय र मिति, ती पृष्ठहरूमा व्यतीत गरिएको समय, अद्वितीय जस्ता जानकारी समावेश गर्न सक्दछ। उपकरण पहिचानकर्ता र अन्य निदान डेटा।
ट्रयाकिंग र कुकीज डेटा
हामी हाम्रो वेबसाइटमा गतिविधि ट्र्याक गर्न र निश्चित जानकारी राख्न कुकीहरू र समान ट्र्याकिcking टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्दछौं।
कुकीज डाटाको एक सानो राशिको साथ फाईलहरू हुन् जसमा अज्ञात अद्वितीय पहिचानकर्ता समावेश हुन सक्छ। कुकीहरू तपाइँको ब्राउजरमा एक वेबसाइटबाट पठाइन्छ र तपाइँको उपकरणमा भण्डारण गरिन्छ। ट्र्याकिंग टेक्नोलोजीहरू पनि प्रयोग गरिन्छ बेकनहरू, ट्यागहरू, र स्क्रिप्ट्स जानकारी स collect्कलन गर्न र ट्र्याक गर्न र हाम्रो वेबसाइट सुधार र विश्लेषण गर्न।
तपाइँ तपाइँको ब्राउजरलाई सबै कुकीहरू अस्वीकार गर्न वा कुकी पठाउने बेलामा संकेत दिन निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, यदि तपाइँ कुकिजहरू स्वीकार गर्नुहुन्न भने, तपाइँ हाम्रो वेबसाइटको केहि अंशहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुन्न।
सत्र कुकीहरू। हामी हाम्रो वेबसाइट अपरेट गर्न सत्र कुकीजको प्रयोग गर्छौं।
प्राथमिकता कुकीहरू। हामी तपाईंको प्राथमिकता र बिभिन्न सेटिंग्स याद गर्न प्राथमिकता कुकीहरू प्रयोग गर्दछौं।
सुरक्षा कुकिज। हामी सुरक्षा उद्देश्यका लागि सुरक्षा कुकिज प्रयोग गर्छौं।
Quotespedia.org विभिन्न उद्देश्यका लागि संकलित डेटा प्रयोग गर्दछ:
वेबसाइट प्रदान र मर्मत गर्न
विश्लेषण वा मूल्यवान जानकारी प्रदान गर्नका लागि हामी वेबसाइटलाई सुधार गर्न सक्दछौं
वेबसाइट को उपयोग अनुगमन गर्न
कुकी एउटा सानो फाइल हो जसले तपाइँको कम्प्यूटरको हार्ड ड्राइभमा राख्नको लागि अनुमति माग्छ। एक पटक तपाईं सहमत भएपछि, फाईल थपियो र कुकीले वेब ट्राफिकको विश्लेषण मद्दत गर्दछ वा तपाईंलाई कुनै खास साइट भ्रमण गर्दा तपाईंलाई जानकारी दिन्छ। कुकिजले वेब अनुप्रयोगहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईंलाई प्रतिक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ। वेब अनुप्रयोगले तपाइँको प्राथमिकताहरूको बारेमा जानकारी भेला गरेर र सम्झना गरेर तपाइँको आवश्यकताहरू, मनपर्ने र मननपर्नेको लागि यसको अपरेशनहरू टेलर गर्न सक्छ। कुन पृष्ठहरू प्रयोग भइरहेको छ भनि हामी पहिचान गर्न ट्राफिक लग कुकीहरू प्रयोग गर्छौं। यसले हामीलाई वेब पृष्ठ ट्राफिकको बारेमा डेटा विश्लेषण गर्न र हाम्रो वेबसाइटलाई अभिलेखको आवश्यकता अनुरूप दर्शाउन मद्दत गर्दछ। हामी यो जानकारी मात्र तथ्याical्कगत विश्लेषण उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्छौं र त्यसपछि डाटा प्रणालीबाट हटाइन्छ। समग्रमा, कुकिजले हामीलाई अझ राम्रो वेबसाइट प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ, जुन तपाईंलाई कुन पृष्ठहरू उपयोगी पायो र के नहुने निरीक्षण गर्न हामीलाई सक्षम पारेर। कुनै पनी कुकीले हामीलाई तपाईंको कम्प्युटरमा पहुँच गर्न वा तपाईंको बारेमा कुनै जानकारी दिन्छ। तपाइँ कुकीहरू स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै जसो वेब ब्राउजरहरूले स्वचालित रूपमा कुकीहरू स्वीकार गर्दछन्, तर यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने प्राय: तपाइँको ब्राउजर सेटि browser कुकीहरू अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई वेबसाइटको पूर्ण लाभ लिनबाट रोक्न सक्छ।
थप रूपमा, Quotespedia कुकीहरू इन्टरनेटमा विभिन्न वेबसाइटहरूमा तपाइँको विज्ञापनहरू देखाउन प्रयोग गर्दछ।
तपाईं गुगलको भ्रमण गरेर कुकिजको गुगलको प्रयोग अप्ट-आउट गर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन सेटिंग्स.
तेस्रो पार्टी विक्रेताहरू
गुगल सहित तेस्रो-पक्ष विक्रेताहरू, तपाईंको अघिल्लो वेब साइट भ्रमणमा आधारित विज्ञापनहरू प्रस्तुत गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दछ।
गुगलको डबलक्लिक कुकीको प्रयोगले यसलाई र यसको पार्टनरहरूलाई तपाईको विज्ञापनहरू प्रदान गर्न सक्षम गर्दछ कोटेशेडिया ब्लॉग र / वा इन्टरनेटमा अन्य साइटहरूमा तपाईंको भ्रमणको आधारमा।
तपाइँ भ्रमण गरेर रूचि-आधारित विज्ञापनको लागि DoubleClick कुकीको प्रयोगबाट अप्ट आउट गर्न सक्नुहुनेछ विज्ञापन सेटिंग्स। (वा भ्रमण गरेर aboutads.info.)
तेस्रो पक्षहरूले कुकीहरू, वेब बीकनहरू, र समान प्रविधिहरू तपाइँको वेबसाइट भ्रमण र इन्टरनेटमा अन्त कतै जानकारि लिन र प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ र त्यो जानकारीलाई मापन सेवाहरू र लक्षित विज्ञापनहरू प्रदान गर्न प्रयोग गर्दछ।
Google विश्लेषण : गुगल एनालिटिक्स एक वेब एनालिटिक्स सेवा हो जुन गुगल द्वारा प्रस्ताव गरिएको हो जुन ट्रैफिक गर्दछ र वेबसाइट ट्राफिक रिपोर्ट गर्दछ। गुगलले हाम्रो सेवा को उपयोग ट्र्याक गर्न र अनुगमन गर्न डाटा संकलन गर्दछ। यो डाटा अन्य गुगल सेवाहरूसँग साझेदारी गरिएको छ। गुगलले स data्कलन गरिएको डाटालाई यसको आफ्नै विज्ञापन नेटवर्कको विज्ञापन प्रासंगिक गर्न र निजीकृत गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ। तपाईं गुगल विश्लेषक अप्ट-आउट ब्राउजर एड्-अन स्थापना गरेर गुगल एनालिटिक्सलाई सेवामा आफ्नो गतिविधि उपलब्ध गराउन अप्ट-आउट गर्न सक्नुहुन्छ। एड्-अनले गुगल एनालिटिक्स जाभास्क्रिप्ट (ga.js, विश्लेषक। Js, र dc.js) लाई भ्रमण गतिविधिहरूको बारेमा Google विश्लेषकसँग जानकारी साझा गर्नबाट रोक्छ।
Google को गोपनीयता प्रथाहरूमा थप जानकारीको लागि, कृपया Google गोपनीयता र सर्तहरू वेब पृष्ठमा जानुहोस्: https://policies.google.com/privacy?hl=en
हामी समय समयमा हाम्रो गोपनीयता नीति अपडेट गर्न सक्छौं। तपाईंलाई कुनै पनि परिवर्तनहरूको लागि आवधिक रूपमा यो गोपनीयता नीति समीक्षा गर्न सल्लाह दिइन्छ। यस गोपनीयता नीतिमा परिवर्तनहरू प्रभावकारी छन् जब तिनीहरू यस पृष्ठमा पोस्ट गरिन्छन्।
इमेल बाट: [इमेल सुरक्षित]